Alignment to Air Ihe Ngosi 3D - Imewe Mmewe
Satọdee 30 Ọktoba 2021
Ihe Ngosi 3D Banyere ihe okike leta, Jin bidoro na mkpụrụedemede A. Ma, mgbe a bịara n’uche echiche ahụ, ọ nwara ịchọpụta ọnọdụ uche siri ike na-atụgharị uche na nkà ihe ọmụma ya nke na-arụ ọrụ ma na-ahazi n’otu oge. Ka ọ na-aga, ọ bịara were okwu ndị na-emegiderịta onwe ya, guzoro n'echiche ya n'ụzọ ụfọdụ dịka ịhazi ikuku nke bụ isi ọrụ a. N'iburu nke ahụ n'uche, ihe ngosi ahụ na-enye oge doro anya ma sie ike karịa n'okwu mbụ. N'aka nke ọzọ, nke a ga - ejedebe na mgbanwe ga - agbanwe wee gosipụta leta ikpeazụ.
Aha oru ngo : Alignment to Air, Aha ndị na-emepụta ya : Jin Jeon, Aha onye ahịa : Jin Jeon(J2Motion).
Ihe nkiri, vidiyo na ihe ngosi
good morning original calendar 2012 “Farm” Kalenda Mọnde 29 Novemba
inci Seramiiki Mbọsị Ụka 28 Novemba
Prisma Onye Na-Ahụ Maka Ntụpọ Ultrasonic Nwere Ntụpọ Satọdee 27 Novemba
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Mọnde 29 Novemba
Chepụta akụkọ mgbe ochie Mbọsị Ụka 28 Novemba
Nhazi nke ubochi Satọdee 27 Novemba
Onye rụrụ ụbọchị Fraịdee 26 Novemba
Otu mmebe nke ụbọchị Tọọzdee 25 Novemba
Ihe Ngosi 3D Jin Jeon Alignment to Air